ပြတ်သွားတဲ့ Relationshipတွေကျော်ဖြတ်ရမယ့် အဆင့်၅မျိုး | Buzzy
ပြတ်သွားတဲ့ Relationshipတွေကျော်ဖြတ်ရမယ့် အဆင့်၅မျိုး
ပူပင်ကြောင့်ကြမှုတွေ လျော့ကျစေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်.
သင်တို့လမ်းခွဲလိုက်တဲ့နေ့ကစပြီး အိပ်မပျော်တဲ့ညတွေဘယ်နရက်ဆက်တိုက်ရှိနေပြီလဲ ?
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကျောခိုင်းလိုက်တည်းက နာကျင်ရတဲ့ရက်တွေဘယ်နရက်ရှိနေပြီလဲ ?
အတိတ်မှာပဲကိုယ့်ကိုကိုယ်ပိတ်လှောင်ထားပြီး ရှေ့ဆက်တိုးမရဖြစ်နေပြီလား ?
သင်မေ့ချင်တယ်ဟုတ်..ပြီးတော့ ခွင့်လည်းလွှတ်ချင်တယ်..ဒါပေမယ့် သင်မတတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ အတိတ်ကအကောင်းဆုံးအမှတ်တရတွေကို မေ့ပျောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ သင်ထင်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သင်တို့နှစ်ယောက်အတူသွားခဲ့နေရာတွေကိုပြန်ရောက်ရင် ရွေရောင်နေ့ရက်ဟောင်းတွေက သင့်စိတ်ထဲပြန်ပေါ်လာပြီး မျက်ရည်တွေအဖြစ်စီးဆင်းသွားပြန်ရော။
အဲ့ဒီအရာတွေကို ဒီတိုင်းပထုတ်လိုက်ဖို့က မလွယ်ကူပါဘူး။ပူပင်ကြောင့်ကြမှုတွေ လျော့ကျစေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆွစ်ဇာလန် စိတ်ပညာရှင် Elisabeth Kübler-Rossက သူမရဲ့ စာအုပ် On Death and Dying (1969)မှာ စိတ်ပူပင်မှုလျော့ကျနည်း ငါးမျိုးကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။အစပိုင်းမှာတော့ သူမစာအုပ်တွေက နောက်ဆုံးအဆင့်လူနာတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ စိုးရိမ်ပူပင်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့လူတွေရဲ့ အကျင့်စရိုက်နဲ့ဆက်စပ်သည့် စာအုပ်တွေထုတ်ဝေခဲ့တယ်။
သငျတို့လမျးခှဲလိုကျတဲ့နကေ့စပွီး အိပျမပြျောတဲ့ညတှဘေယျနရကျဆကျတိုကျရှိနပွေီလဲ ?
တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျကြောခိုငျးလိုကျတညျးက နာကငျြရတဲ့ရကျတှဘေယျနရကျရှိနပွေီလဲ ?
အတိတျမှာပဲကိုယျ့ကိုကိုယျပိတျလှောငျထားပွီး ရှဆေ့ကျတိုးမရဖွဈနပွေီလား ?
သငျမခေ့ငျြတယျဟုတျ..ပွီးတော့ ခှငျ့လညျးလှတျခငျြတယျ..ဒါပမေယျ့ သငျမတတျနိုငျဘူးဖွဈနတေယျ။ အတိတျကအကောငျးဆုံးအမှတျတရတှကေို မပြေ့ောကျနိုငျလိမျ့မယျလို့ သငျထငျလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ သငျတို့နှဈယောကျအတူသှားခဲ့နရောတှကေိုပွနျရောကျရငျ ရှရေောငျနရေ့ကျဟောငျးတှကေ သငျ့စိတျထဲပွနျပျေါလာပွီး မကျြရညျတှအေဖွဈစီးဆငျးသှားပွနျရော။
အဲ့ဒီအရာတှကေို ဒီတိုငျးပထုတျလိုကျဖို့က မလှယျကူပါဘူး။ပူပငျကွောငျ့ကွမှုတှေ လြော့ကစြဖေို့ နညျးလမျးလေးတှဖေျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ဆှဈဇာလနျ စိတျပညာရှငျ Elisabeth Kübler-Rossက သူမရဲ့ စာအုပျ On Death and Dying (1969)မှာ စိတျပူပငျမှုလြော့ကနြညျး ငါးမြိုးကိုမိတျဆကျပေးခဲ့တယျ။အစပိုငျးမှာတော့ သူမစာအုပျတှကေ နောကျဆုံးအဆငျ့လူနာတှအေတှကျ ရညျရှယျပွီးထုတျဝခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။ နောကျပိုငျးမှာ စိုးရိမျပူပငျမှုတှနေဲ့ရငျဆိုငျခဲ့ရတဲ့လူတှရေဲ့ အကငျြ့စရိုကျနဲ့ဆကျစပျသညျ့ စာအုပျတှထေုတျဝလောတယျ။
၁.ငြင်းဆန်ခြင်း (မဖြစ်နိုင်ပါဘူး )
Relationshipတစ်ခုပြတ်တဲ့အခါ လက်ရှိအခြေအနေမှန်ကို ငြင်းဆန်ချင်တယ်။နာကျင်မှုဒဏ်ကိုခံစားဖို့ သင့်အနေနဲ့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး။ အရာအားလုံးအဆင်ပြေသလို သင်ဟန်ဆောင်မိနေလိမ့်မယ်..ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲမှာတော့ ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာ သင်ကိုယ်တိုင်အသိဆုံးပါ။
ကိုယ်ချစ်ရတဲ့လူကို ဆုံးရှုံးတဲ့အခါ အမှန်တရားကိုလက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။
* အရာအားလုံးကပြောင်းလဲနေတာလို့ နေ့တိုင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်သတိပေးပါ
* အရင်တိုင်းဖုန်းခေါ်တာ၊မက်ဆေ့ခ်ျပို့တတ်တဲ့ အကျင့်တွေကိုရအောင်ဖျောက်ပါ
* အရမ်းဝမ်းနည်းလာတဲ့အခါ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ငိုလိုက်ပါ
* အမှန်တရားကိုလက်ခံနိုင်အောင် ရှင်းပြပေးနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပါ
* နေ့တိုင်းကိုယ်ခံစားရသမျှကို ဒိုင်ယာရီမှာချရေးပါ
Relationshipတဈခုပွတျတဲ့အခါ လကျရှိအခွအေနမှေနျကို ငွငျးဆနျခငျြတယျ။နာကငျြမှုဒဏျကိုခံစားဖို့ သငျ့အနနေဲ့အဆငျသငျ့မဖွဈသေးဘူး။ အရာအားလုံးအဆငျပွသေလို သငျဟနျဆောငျမိနလေိမျ့မယျ..ဒါပမေယျ့ စိတျထဲမှာတော့ ဘာဖွဈနလေဲဆိုတာ သငျကိုယျတိုငျအသိဆုံးပါ။
ကိုယျခဈြရတဲ့လူကို ဆုံးရှုံးတဲ့အခါ အမှနျတရားကိုလကျခံနိုငျအောငျကွိုးစားပါ။
* အရာအားလုံးကပွောငျးလဲနတောလို့ နတေို့ငျးကိုယျ့ကိုကိုယျသတိပေးပါ
* အရငျတိုငျးဖုနျးချေါတာ၊မကျဆခြေျ့ပို့တတျတဲ့ အကငျြ့တှကေိုရအောငျဖြောကျပါ
* အရမျးဝမျးနညျးလာတဲ့အခါ စိတျလှတျကိုယျလှတျ ငိုလိုကျပါ
* အမှနျတရားကိုလကျခံနိုငျအောငျ ရှငျးပွပေးနိုငျတဲ့လူတဈယောကျနဲ့တှပေ့ါ
* နတေို့ငျးကိုယျခံစားရသမြှကို ဒိုငျယာရီမှာခရြေးပါ
၂.စိတ်ဆိုးခြင်း (ဘာလို့ ငါ့ကိုမှသူလုပ်ရက်ရတာလဲ)
အမှန်တရားက သင်တို့ရဲ့အမှတ်တရတွေကိုေ၀၀ါးအောင်လုပ်ပစ်လိမ့်မယ်.. အသည်းကွဲဒဏ်ကို တနုတ်နုတ်နဲ့ခံစားနေရမယ်။ထိုအသည်းကွဲဒဏ်က ဦးတည်ချက်လွဲပြီိး စိတ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ ပေါက်ကွဲတာမျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်။ ကိုယ်နာကျင်တာကိုဖြေသိမ့်ဖို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိသမျှလူတွေအားလုံးကို ပတ်ရမ်းမိသွားမယ်။သူတို့က သင်ဒေါသထွက်သင့်တဲ့ လူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သင်သိပေမယ့် စိတ်ခံစားချက်ကို မထိန်းချုပ်နိုင်ဖြစ်နေမယ်။
* လမ်းခွဲလိုက်တဲ့အတွက် သင်တို့နှစ်ယောက်လုံးမှာတာဝန်ရှိမှန်းသိနေရမယ်
* ဘယ်သူမှပြည့်စုံတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့မှတ်ယူထားရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ခွင့်လွှတ်တတ်သွားမယ်
* ဒီလိုခံစားနေရတာ သင့်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး
* အားကစားလုပ်ခြင်းနဲ့လည်း သင့်စိတ်ကိုနှစ်သိမ့်နိုင်ပါတယ်
အမှနျတရားက သငျတို့ရဲ့အမှတျတရတှကေို ဝဝေါးအောငျလုပျပဈလိမျ့မယျ.. အသညျးကှဲဒဏျကို တနုတျနုတျနဲ့ခံစားနရေမယျ။ထိုအသညျးကှဲဒဏျက ဦးတညျခကျြလှဲပွီိး စိတျထှကျပေါကျအနနေဲ့ ပေါကျကှဲတာမြိုးတှဖွေဈသှားတတျတယျ။ ကိုယျနာကငျြတာကိုဖွသေိမျ့ဖို့ ပတျဝနျးကငျြမှာရှိသမြှလူတှအေားလုံးကို ပတျရမျးမိသှားမယျ။သူတို့က သငျဒေါသထှကျသငျ့တဲ့ လူတှမေဟုတျဘူးဆိုတာ သငျသိပမေယျ့ စိတျခံစားခကျြကို မထိနျးခြုပျနိုငျဖွဈနမေယျ။
* လမျးခှဲလိုကျတဲ့အတှကျ သငျတို့နှဈယောကျလုံးမှာတာဝနျရှိမှနျးသိနရေမယျ
* ဘယျသူမှပွညျ့စုံတယျဆိုတာမရှိဘူးလို့မှတျယူထားရငျ ကိုယျ့ကိုကိုယျခှငျ့လှတျတတျသှားမယျ
* ဒီလိုခံစားနရေတာ သငျ့တဈယောကျတညျးမဟုတျပါဘူး
* အားကစားလုပျခွငျးနဲ့လညျး သငျ့စိတျကိုနှဈသိမျ့နိုငျပါတယျ
၃.ဖြည့်တွေးခြင်း (ငါတို့တစ်ခါလောက်ပဲ ထပ်ကြိုးစားကြည့်ရအောင်)
ထိုအသိက သင့်ကိုကျောက်ကမ်းပါးအစွန်ဖျားဆီတွန်းပို့နေသလို ခံစားနေရပြီဆိုရင် လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် သင်ရုန်းကန်ကြိုးစားတော့မယ်။ဒီအခြေအနေကို ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက် သင်ဘာမမြင်ဖို့ဘဲ လုပ်ချင်ရာလုပ်မိလိမ့်မယ်။ သူပြန်လာအောင် နည်းလမ်းပေါင်းစုံသင်သုံးမိမယ်။ ဘာလို့ဆို သင်နာကျင်မှုကိုမခံစားနိုင်တော့လို့လေ။
အချိန်တော်တော်များများမှာ ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းနေမိလိမ့်မယ်.. ဒီတိုင်းပဲ သင်လက်လွှတ်လိုက်တာပိုကောင်းပါတယ်။
* သူနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုမတွေ့မိအောင် အင်တာနက်မသုံးပါနဲ့
* သင်တို့နှစ်ယောက် ပြန်မတွဲနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကို ရဲရဲကြီးလက်ခံလိုက်ပါ
* သူပြန်လာအောင် ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့တော့
* သင်တစ်ယောက်တည်းလည်း ရပ်တည်နိုင်ပါတယ်
ထိုအသိက သငျ့ကိုကြောကျကမျးပါးအစှနျဖြားဆီတှနျးပို့နသေလို ခံစားနရေပွီဆိုရငျ လှတျမွောကျဖို့အတှကျ သငျရုနျးကနျကွိုးစားတော့မယျ။ဒီအခွအေနကေို ပွောငျးလဲနိုငျဖို့အတှကျ သငျဘာမမွငျဖို့ဘဲ လုပျခငျြရာလုပျမိလိမျ့မယျ။ သူပွနျလာအောငျ နညျးလမျးပေါငျးစုံသငျသုံးမိမယျ။ ဘာလို့ဆို သငျနာကငျြမှုကိုမခံစားနိုငျတော့လို့လေ။
အခြိနျတျောတျောမြားမြားမှာ ဒီလိုမြိုးမဖွဈပါစနေဲ့လို့ ဆုတောငျးနမေိလိမျ့မယျ.. ဒီတိုငျးပဲ သငျလကျလှတျလိုကျတာပိုကောငျးပါတယျ။
* သူနဲ့ပတျသတျတဲ့အကွောငျးအရာတဈခုခုမတှမေိ့အောငျ အငျတာနကျမသုံးပါနဲ့
* သငျတို့နှဈယောကျ ပွနျမတှဲနိုငျတော့ဘူးဆိုတာကို ရဲရဲကွီးလကျခံလိုကျပါ
* သူပွနျလာအောငျ ဘာမှမလုပျပါနဲ့တော့
* သငျတဈယောကျတညျးလညျး ရပျတညျနိုငျပါတယျ
၄.စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း (အားလုံးပြီးသွားပြီ )
သင့်မျှော်လင့်ထားသလို ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာကို နောက်ဆုံးနားလည်လာလိမ့်မယ်။ တကယ်စိတ်ဓာတ်ကျလာမယ်..တစ်ချိန်လုံးပင်ပန်းနွမ်းလျနေမယ်..ဘာမှလုပ်ချင် ကိုင်ချင်စိတ်မရှိဘူး..မိသားစု၊သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ငြင်းဆန်မယ်။ တစ်ချို့ဆို ဘာမှမစားနိုင် မသောက်နိုင်.. တစ်ချို့ဆို တစ်ချိန်လုံးစားနေတာတွေလည်း မြင်ဖူးတယ်။မျှော်လင့်ချက်မဲ့ခြင်းက သင့်ကိုရှေ့ဆက်မတတ်နိုင်အောင်လုပ်မယ်။
ဒါကိုလွယ်ကူတယ်လို့ ဘယ်သူမှမပြောဘူး..ဒါပေမယ့် အရမ်းနောက်မကျခင် သင့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေကို ကုစားဖို့လိုပြီနော်။
* အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့လူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပါ
* အလုပ်အရမ်းပိတဲ့အခါ နားလိုက်ပါ
* နားထောင်ပေးဖို့ ဆန္ဒရှိသူနဲ့ စကားပြောပါ
* အဆွေးသီချင်း နားထောင်(အဆွေးသီချင်းက အသည်းကွဲနေသူကိုနှစ်သိမ့်ပေးနိုင်တယ်ဟု သိပံ္ပပညာရှင်များ ပြောကြား)
သငျ့မြှျောလငျ့ထားသလို ဘာမှလုပျလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကို နောကျဆုံးနားလညျလာလိမျ့မယျ။ တကယျစိတျဓာတျကလြာမယျ..တဈခြိနျလုံးပငျပနျးနှမျးလနြမေယျ..ဘာမှလုပျခငျြ ကိုငျခငျြစိတျမရှိဘူး..မိသားစု၊သူငယျခငျြးတှနေဲ့ တှဆေုံ့ဖို့ငွငျးဆနျမယျ။ တဈခြို့ဆို ဘာမှမစားနိုငျ မသောကျနိုငျ.. တဈခြို့ဆို တဈခြိနျလုံးစားနတောတှလေညျး မွငျဖူးတယျ။မြှျောလငျ့ခကျြမဲ့ခွငျးက သငျ့ကိုရှဆေ့ကျမတတျနိုငျအောငျလုပျမယျ။
ဒါကိုလှယျကူတယျလို့ ဘယျသူမှမပွောဘူး..ဒါပမေယျ့ အရမျးနောကျမကခြငျ သငျ့ရဲ့စိတျပိုငျးဆိုငျရာ အခွအေနကေို ကုစားဖို့လိုပွီနျော။
* အပေါငျးလက်ခဏာဆောငျတဲ့လူတှနေဲ့ တှဆေုံ့ပါ
* အလုပျအရမျးပိတဲ့အခါ နားလိုကျပါ
* နားထောငျပေးဖို့ ဆန်ဒရှိသူနဲ့ စကားပွောပါ
* အဆှေးသီခငျြး နားထောငျ(အဆှေးသီခငျြးက အသညျးကှဲနသေူကိုနှဈသိမျ့ပေးနိုငျတယျဟု သိပ်ပံပညာရှငျမြား ပွောကွား)
အခုအငြိမ်ပိုင်းကိုရောက်ခါနီးပြီ။ သင်ဖြစ်သမျှအရာတိုင်းကို စတင်လက်ခံလာနိုင်တဲ့အခါ စိတ်ပူပင်မှုတွေကို ငြိမ်းသွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအဆင့်ရောက်ပြီဆို သင့်လုံးဝပျော်ရွင်သွားပြီလို့ အာမ,မခံနိုင်ပေမယ့် ရောင်ခြည်တန်းတစ်ချို့သင့်ဆီကျရောက်လာပါလိမ့်မယ်..။ ထိုရောင်ခြည်တန်းက သင့်ကိုနေရာမှန်ရောက်အောင်ပြန်ပို့ပေးလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီအခါ ဘ၀မှာငါလုပ်စရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လို့ နားလည်လာမယ်။
* ဓာတ်ပုံဟောင်းတွေကို ပြန်မတွေ့နိုင်တဲ့နေရာဆီ ၀ဲလိုက်ပါ
* သင့်ကိုအနာဟောင်းကိုပြန်ဆွနိုင်မယ့် နေရာတွေဆီမသွားပါနဲ့
* လက်လွှတ်လိုက်ခြင်းရဲ့ ရလဒ်ကိုသေချာခံစားကြည့်
* သူငယ်ချင်းအဖြစ်သူနဲ့နေနိုင်တယ်ဆို ပြန်ဆက်သွယ်ကြည့်ပါ
* အချိန်သာပေးလိုက်ရင် အရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားလိမ့်ဆိုတာကို ယုံကြည်ထားပါ
လူတိုင်း ကြာရှည်ခိုင်မြဲတဲ့ Relationship ကိုလိုချင်ပါတယ်။ဘ၀မှာဘာပဲဖြစ်နေပါစေ အနားမှာ မခွဲမခွာနေပေးမယ့်လူမျိုးကို လိုချင်မိလိမ့်မယ်။ဆုပ်ကိုင်ထားချင်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆုပ်ကိုင်ထားမယ့်အစား လက်လွှတ်လိုက်တာက သင့်ကိုပိုပြီး စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့လူအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။ အနာဂတ်ကိုကြည့်လိုက်ပါ... သင်ဘယ်လောက်ရင့်ကျက်နေပြီလဲဆိုတာ အံ့သြသွားပါလိမ့်မယ်။
အခုအငွိမျပိုငျးကိုရောကျခါနီးပွီ။ သငျဖွဈသမြှအရာတိုငျးကို စတငျလကျခံလာနိုငျတဲ့အခါ စိတျပူပငျမှုတှကေို ငွိမျးသှားနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ဒီအဆငျ့ရောကျပွီဆို သငျ့လုံးဝပြျောရှငျသှားပွီလို့ အာမ,မခံနိုငျပမေယျ့ ရောငျခွညျတနျးတဈခြို့သငျ့ဆီကရြောကျလာပါလိမျ့မယျ..။ ထိုရောငျခွညျတနျးက သငျ့ကိုနရောမှနျရောကျအောငျပွနျပို့ပေးလိမျ့မယျ။ အဲ့ဒီအခါ ဘဝမှာငါလုပျစရာတှအေမြားကွီးရှိသေးတယျလို့ နားလညျလာမယျ။
* ဓာတျပုံဟောငျးတှကေို ပွနျမတှနေို့ငျတဲ့နရောဆီ ဝဲလိုကျပါ
* သငျ့ကိုအနာဟောငျးကိုပွနျဆှနိုငျမယျ့ နရောတှဆေီမသှားပါနဲ့
* လကျလှတျလိုကျခွငျးရဲ့ ရလဒျကိုသခြောခံစားကွညျ့
* သူငယျခငျြးအဖွဈသူနဲ့နနေိုငျတယျဆို ပွနျဆကျသှယျကွညျ့ပါ
* အခြိနျသာပေးလိုကျရငျ အရာအားလုံးအဆငျပွသှေားလိမျ့ဆိုတာကို ယုံကွညျထားပါ
လူတိုငျး ကွာရှညျခိုငျမွဲတဲ့ Relationship ကိုလိုခငျြပါတယျ။ဘဝမှာဘာပဲဖွဈနပေါစေ အနားမှာ မခှဲမခှာနပေေးမယျ့လူမြိုးကို လိုခငျြမိလိမျ့မယျ။ဆုပျကိုငျထားခငျြမိတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဆုပျကိုငျထားမယျ့အစား လကျလှတျလိုကျတာက သငျ့ကိုပိုပွီး စိတျဓာတျခိုငျမာတဲ့လူအဖွဈပွောငျးလဲသှားစနေိုငျပါတယျ။ အနာဂတျကိုကွညျ့လိုကျပါ... သငျဘယျလောကျရငျ့ကကျြနပွေီလဲဆိုတာ အံ့သွသှားပါလိမျ့မယျ။